✯☼☻Bright Studio eNewcastle Ngaphantsi kweLyme☻☼✯
Nokuba yeyiphi injongo yakho yokundwendwela iNewcastle phantsi kweLyme, esi sixeko sinomdla ngokuqinisekileyo siya kubonelela ngento ngayo yonke incasa. Le ndawo yakhiwe ngokutsha inezitudiyo ezintle ezilungele ukuya kuthi ga kubantu aba-2. Ke nokuba undwendwela iigalari zobugcisa kunye nemiboniso okanye uhambahamba nje kwimarike edumileyo yaseNewcastle, iya kuba yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala kuwe!
**Ngokubhukisha nathi uya kunikwa isaphulelo sokufikelela kumaqonga amahlakani ethu. Iinkcukacha zale nzuzo ziya kuthunyelwa kuwe emva kokubhukisha.**
Kukho ibhedi encinci ekhululekileyo enegumbi lokuhlambela labucala elinesinki kunye nendlu yangasese.Unendawo yedesika enesihlalo kwaye uya kufumana indawo yokugcina ngokubanzi kwigumbi.Kukho ikhitshi eline-oven yecombi microwave, hob, ketile kunye netoaster.
Nceda uqonde ukuba nangona eli iligumbi labucala, unabo abamelwane ngoko ke nceda ubonise intlonipho ngokunciphisa ingxolo ngakumbi xa ufika kwaye uphuma kwisakhiwo.
INewcastle phantsi kweLyme yidolophu enomtsalane, edlamkileyo yentengiso enekhaya kwiivenkile ezizimeleyo, iindawo zokutyela ezinkulu kunye neemyuziyam ezinomdla.
Kukho ukhetho olumbalwa olumalunga nemizuzu emi-5 ukusuka kumakhonkco okutya okukhawulezayo ukuya kwiikhefi okanye kwindawo efanelekileyo yokuhlala.
Iipesika zaseTshayina ezithathwayo kukuhamba imizuzu emi-5 ngelixa unxantathu wePizza kunye neMcdonald zombini zingaphantsi kwemizuzu emi-3 yokuhamba ukuba ufuna ukutya okutyayo ukuzisa ekhaya.Ukuba ufuna ukusebenzisa ikhitshi lakho ungathenga imveliso entsha ukuze uziphekele eLidl, eMorrison okanye eAldi yonke into engaphantsi kwemizuzu eli-10 uhambe.
INewcastle phantsi kweLyme likhaya kwimarike yembali apho uya kuba nakho ukufumana intengiso malunga nayo nantoni na phakathi kwezitadi ezingaphezu kwama-80.Ukuba ukhetha ukuhlala usebenza okanye ubukele nje imidlalo esecaleni ibonelela ngezinto ezininzi zemidlalo onokukhetha kuzo.Ngapha koko, Idolophu yaseNewcastle F.C imalunga nemizuzu engama-25 uhambe.
Enkosi kwindawo esembindini wedolophu kuMntla Ntshona weNgilani, uhambo losuku oluya eLiverpool, eManchester, eSheffield okanye eBirmingham lufikeleleka ngokulula.Ukuba unqwenela ukuhamba umgama omde, iLondon yiyure nje ezi-2 ezinesiqingatha kwizithuthi zikawonke-wonke.
Ngexesha lokuhlala kwakho uya kuncediswa yiarhente yobuchwephesha yokubamba iStaykeepers Homes eya kuhoya uhambo lwakho lweendwendwe.